जनकपुरका जनता जान्न चाहन्छन्
प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका अहिले जनकपुरवासीबीच दुई सन्दर्भका कारण निकै चर्चित हुन पुगेको छ । पहिलो, पालिकाका मेयरले प्रयोग गर्ने भनेर निकै महँगो गाडी खरीद गरिएको छ । उपमहानगरपालिकासँग यसभन्दा पहिले पनि गाडीहरु थिए र मेयरले तिनै गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए । जनकपुरवासीको चासो छ, अहिले यो महँगो गाडी खरीद गर्नु किन आवश्यक थियो ? नगरवासीको मनमा जिज्ञासा त छ तर यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने तरिका भेट्न सकिरहेका छैेनन् ।
प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका अहिले जनकपुरवासीबीच दुई सन्दर्भका कारण निकै चर्चित हुन पुगेको छ । पहिलो, पालिकाका मेयरले प्रयोग गर्ने भनेर निकै महँगो गाडी खरीद गरिएको छ । उपमहानगरपालिकासँग यसभन्दा पहिले पनि गाडीहरु थिए र मेयरले तिनै गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए । जनकपुरवासीको चासो छ, अहिले यो महँगो गाडी खरीद गर्नु किन आवश्यक थियो ? नगरवासीको मनमा जिज्ञासा त छ तर यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने तरिका भेट्न सकिरहेका छैेनन् ।अर्को सन्दर्भ हो, अहिले उपमहानगरपालिकाका सडकवत्तीको आवश्यकता पूर्ति गर्न पोलहरुमा एलइडि वल्व लगाइएको छ । जनकपुरवासी यी वल्वहरु कुन मूल्यमा खरीद गरिएका हुन् र कसरी जडान गरिएका हुन् भनेर जान्न चाहन्छन् । तर कतैबाट जवाफ पाइरहेका छैनन् । यी वल्वको मूल्य प्रतिगोटा चार सय रुपैयाभन्दा बढी हो भन्ने नगरमा व्यापक चर्चा छ, तर नगरवासी यसप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यी दुवै यस्ता सन्दर्भ हुन्, जसबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक हुन नसक्दा अनेकथरि कुरा अनुमान गर्ने आधार जनताबीच बढिरहेको छ । प्रक्रियाहरु परदर्शी नहुँदा पालिकाप्रति नै अविश्वास बढने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । जनतालाई अन्यौलमा राखेर नानाथरि नकारात्मक कुरा जनमानसमा प्रसार हुन दिनुको साटो सत्य कुरा सार्वजनिक गरेर जनतालाई यथार्थ जानकारी गराएर विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अवसर पालिकासँग छ, तर पालिका त्यसका लागि तयार देखिएको छैन । परिणमतः शंकाले स्थान ओगट्न सहज वातावरण पाएको छ । सत्य के हो, थाहा छैन । सत्य अर्को पनि हुन सक्छ । सत्य जानकारीको उपस्थितिमा जनताबीच अहिले विद्यमान चर्चा गलत पनि प्रमाणित हुन सक्छ । जे होस, अहिलेको अवस्था भनेको प्रक्रियाहरु परदर्शी नहुँदा आशंकाको कुहिरो बाक्लिँदै गएको छ । यसको समाधान स्वयं पालिकाले गर्न सक्छ र त्यस्तो कुहिरो हटाउन सक्छ । यसबाट पालिककै विश्वसनयतामा वृद्धि हुन्छ, यसमा शंका छैन । यसका अतिरिक्त तरिका अर्को पनि छ, जनता स्वयं सक्रिय भएर जानकारी प्राप्तिका दिशामा पहल गर्ने । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन्मा छ । यो कानूनको प्रयोग गरेर आमनागरिकले कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग गर्न सक्छन् र यस्ता निकायले माग भएका सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका सन्दर्भमा पनि जनताले यो कानूनको प्रयोग गरी आफ्नो जिज्ञासाको समाधान गर्न सक्छन् । मनमा प्रश्नका शृंखलाहरु लिएर अन्यमनस्करुपमा विथोलिएर बस्नुको विकल्प यो कानूनको प्रयोग उचित हुन सक्छ । कानूनले केही सूचनालाई अपवाद मानेको छ । अर्थात् जनताले मागे पनि केही सम्बेदनशील सूचना तत्काल नपाउन सक्छन् । तर माथि चर्चा गरिएको सन्दर्भको सूचना सम्बेदनशीलको सूचीमा नपर्ने भएकोले ती अपवादको श्रेणीमा पर्दैनन् । नेपालमा अहिले सूचनाको हकको प्रयोगका लागि जागरण अभियान नै चलेको छ । खास गरी सन् १९९० यता सूचनाको हक समाजको एउटा अभिन्न अंगका रुपमा ठानिन थालिएको छ । समाजलाई पारदर्शी बनाउन र शुसासनको अनुभुति दिलाउनका लागि यो हक उपयोगी भएको महशुस सबैले गर्न थालेको अवस्था छ । सन् १७६६ मा स्वीडेनमा यो हकले कानूनी मान्यता पाएको थियो । तर, १९९० सम्म आइपुग्दा विश्वका १३ देशमा मात्र यो हकले कानूनी मान्यता पाएको थियो । ९०को दशकसंगै चलेको लोकतन्त्रको प्रवाहले सूचनाको हकको महत्व र आवश्यकतालाई स्थापित गर्दै गयो । ९० यताको २८ बर्षको अवधिमा अहिले विश्वका १सय १८ राष्ट्रहरुमा सूचनाको हक लागू भएको छ भने कतिपय देशहरुमा लागू हुने तयारी रहेको छ । लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन र त्यसमा प्राण भर्न सूचनाको हकको आवश्यकता महशुस गरिएको तथ्यलाई बुझ्न सकिन्छ । नागरिकलाई बलियो बनाउन तथा प्रजातन्त्रको अभ्यास जनस्तरमा गराउन सूचनाको हकले भूमिका खेल्ने कुरामा दुई मत छैन । यो हकको महत्व, आवश्यकता र उपयोगपछिको परिणामका बारेमा अहिले नेपालमा बिभिन्न छलफल, तालिम तथा सेमिनारहरुमा छलफल भै पनि रहेका छन् । ती छलफलहरुले पनि यसको आवश्यकता र प्रभावकारितालाई प्रष्ट्याउने गरेका छन् ।खासगरी अहिले विश्वको साझा एजेण्डा बनेको पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउन सूचनाको हक प्रभावकारी हुने यसका अभियन्ताहरुले बताउने गरेका छन् । सूचनाको हकको राम्रो प्रयोग भएर यसले एउटा परिणाम दिएको उदाहरणका रुपमा भारतलाई लिन सकिन्छ । खासगरी किरण बेदी, अन्ना हजारे हुँदै अरबिन्द केजरीवालहरुले सूचनाको हकको ताकत आफ्नो समाजमा देखाएका छन् । केजरीवाल त यही क्रममै फड्को मारेर राजधानी सहर दिल्लीको मुख्यमन्त्रीसम्म हुन पुगेका छन् । सूचनाको हकले नागरिकलाई बलियो बनाउने र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कुरा यसको अभ्यास गरेका राष्ट्रहरुले सुझाएका पनि छन् । भारतमा यो हक लागू भैसकेपछि त्यहाँका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा मनमोहन ंिसहले भनेका थिए, ।।।भारतले वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास त यो कानुन बनेपछि मात्र गर्न पायो, लोकतन्त्रको प्राण रहेछ सूचनाको हक ।’ उनको यो अभिव्यक्तिले पनि यो हकको अभ्यासले स्थापित गर्ने मूल्यलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । सूचनाको हक आफैमा सक्रियताको अपेक्षा गर्ने कानुन हो । यसको जति प्रयोग ग¥यो, त्यति नै यसले अपेक्षित परिणाम दिने गर्दछ । विशेष समयमा आकर्षित हुने कानूनको रुपमा यो हक रहन सक्दैन । जनताले एउटा नविन संस्कृतिको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनका लागि यो हक प्रयोगको तहमा रहिरहन आवश्यक हुन्छ । सूचनाको हक प्रयोगको अभ्यासले नागरिकलाई व्यक्तिगत तहमा पनि महत्वपूर्ण लाभको अनुभुति दिन सक्छ भने यसले समाजलाई सुशासनको मार्गमा डोे¥याउन समेत मद्दत गर्दछ । मधेशको राजनीति र प्रशासनलाई सुशासनको लक्ष्यका लागि माध्यम मान्ने हो भने सूचनाको हक एक सशक्त ऊर्जा हुने कुरामा दई मत हुन सक्दैन । माथि चर्चा गरिएकोजस्तो जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भ र अन्य प्रयोजनका लागि पनि सूचनाको हक प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायमा रहेकाहरुलाई जनताप्रति जिम्मेबार, जवाफदेह र उत्तरदायी बन्न घचघच्याउन सकिन्छ । निश्चय पनि यो प्रयास सुशासन स्थापनाका दिशामा एक कोशे ढुंगा सावित हुनेछ । सूचनाको हकको प्रयोगवाट सार्वजनिक भएका तथ्यहरुका आधारमा प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ । खासगरी नागरिकले यो हकको प्रयोग गर्दा ५ प्रकारका फाइदा लिन सक्ने अहिलेसम्मको अनुभवले देखाएको छ । ती हुन्, सेवा प्राप्त गर्नु, अवसर प्राप्त गर्नु, न्याय प्राप्त गर्नु, अधिकार प्राप्त गर्नु र नागरिकले आफूलाई बलियो महशुस गर्नु । सूचनाको हकको प्रयोग आफैले गर्ने हो । अरुले प्रयोग गरिदेला भनेर पर्खिबस्ने हो भने त्यसको अर्थ रहँदैन । सामान्य ढाँचामा सूचना माग गर्न सकिन्छ । प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोकिएका हुन्छन्, उनीहरु समक्ष आफूले प्रष्ट रुपमा के सूचना माग गरेको हो, त्यो खुलाई निवेदन दिन सकिन्छ । निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सूचना अधिकारीले मागेको सूचना दिनुपर्दछ । नदिएमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी वा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । त्यसको पनि सुनुवाई नभएमा सूचना आयोगमा उजुरी वा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । यो सहज प्रक्रियामा आफूलाई सहभागी गराई समाजमा सकारात्मक परिणाम दिने तथा नागरिकहरुलाई व्यक्तिगत तहमा पनि लाभका बारेमा जानकारी पाउन सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सबै नागरिक अग्रसर हुनु समयको आवश्यकता हो । नगरिकले समानरुपमा सेवा प्राप्त गर्नु, अवसर प्राप्त गर्नु, न्याय प्राप्त गर्नु, अधिकार प्राप्त गर्नु र नागरिकले आफूलाई बलियो महशुस गर्नु भनेको लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभव गर्न पाउनु हो । यसप्रकारका अधिकारहरुले नै वास्तवमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता अभिबृद्धि गर्ने गर्दछ । सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको प्राण पनि भन्ने गरिन्छ । त्यसकारण यो लोकतन्त्रको प्राण बचाउनका लागि सूचनाको हकको अभ्यास गर्ने संस्कृति स्थापित गर्न आबश्यक पर्दछ । निश्चय पनि प्रदेश २ को राजधानी यस दिशामा जनताको सहयोगी सावित हुने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हुँदैन ।